Nepali Rajneeti | ‘ओलीले जाली कुरा गरे, उहाँ पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्न’
बैसाख १२, २०७८ आइतबार २५२ पटक हेरिएको
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसँगको वार्तामा जाली कुरा गरेको बताएका छन् । उनले शुक्रबार जनकपुरमा नेता कार्यकर्ताहरुसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
भेटमा आफूले जेठ २ गतेमा फर्कौँभन्दा उनी नमानेको नेता नेपालको भनाइ थियो । निर्णय गरेर गइसकेकाले आफू पछाडि फर्किन नचाहेको ओलीले भनेको उनको बताए । ओलीले आफूलाई उल्टो प्रश्न गरेको बताए ।
उनले जेठ २ मा फर्काउभन्दा तपाईहरु किन आउनु भएन भनेर प्रश्न गर्नु भयो ? आफूले प्रतिप्रश्नमा तपाईले बोलाउनुभयो र ? भन्दा ओलीले तपाईँहरुको मोबाइल बिग्रिएको थियो होला भनेर टारेको बताए ।
उनले वार्तामा पार्टी एकताको पक्षमा ओली नदेखिएको बताए । उनले आए आइज नभए जानलाई बाटो खुला छ, भने जस्तो व्यवहार गरेको बताए । उनले ओलीले बालुवाटार, बालकोटलगायतका ठाउँमा बोलाएकाले आफू नगएको उनको भनाइ थियो ।
एमाले बैठक बालुवाटारमा सुरु – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ । आजको बैठकमा नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले दिएको स्पष्टीकरण पत्रबारे निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।
गएको ६ वैशाखको बैठकबाट निर्णय गराएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता नेपालसहित २७ संघीय सांसद र कर्णाली प्रदेशका ५ प्रदेशसभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । जसमध्य खनाल नेपालसहित केही सांसदले स्पष्टीकरण पनि बुझाइसकेका छन् । एमाले संसदीय दल प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उनीहरुले बुझाएको स्पष्टीकरणलाई विश्लेषण गरेर थप कारबाही अगाडी बढाइने बताएका थिए ।
यसबाहेक नेताहरुको कार्यविभाजन, उपनिर्वाचन, प्रदेश सरकार लगायतबारे छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।